Ejirila Korameli City Hospital Tram Line | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliKocaeli City Hospital Tram Line Haziri Atụmatụ
14 / 02 / 2020 41 Kocaeli, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, tram
Ezubere ụzọ ụgbọ oloko Kocaeli n’obodo ukwu
Atụmatụ ahụ a ga-agbatị ga-abanye na Hospitallọ Ọgwụ City na Kocaeli Metropolitan Assembly na atụmatụ ahụ. Ministri Transportgbọ njem na-atụ anya na ọ ga-emepe emepe tupu Mee
Ndi Kocaeli n’obodo ukwu nke onwa February emere nzuko omebe iwu na Leyla Atakan Cultural Center. Na nzukọ a na-eme n'okpuru isi oche nke Onye isi ala Tahir Büyükakın, e dekọtara atụmatụ mmejuputa iwu nke tram n'ọdụ ụgbọ ala City Hospital na atụmatụ ahụ. E nyere Mayor nke B Mayoryükakın ikike ime usoro maka 500 lira ka a ga-enweta ya mgbe nnwere onwe nke Union of Municipalities maka ọrụ enyemaka na-enye ọhaneze Ọgbọ na Mgbakọ Ọchịchị.
Usoro amamịghe nke Hospitallọ Ọgwụ nke City, nke Ministri Ahụike ga-arụ ma mee ka Mịnịstrị nke Transportgbọ njem wuo ya, n'ime atụmatụ a. Ebumnuche mmepe nke 1/5000 na 1/1000 nke usoro ahụ sitere na Kọmitii Zbank na Ọha na Ọha. Ebe a na-etinye eriri ahịrị na atụmatụ ịchekwa osisi, ndị Minista ofgbọ njem ga-amalite ọrụ dị nro. A na-atụ anya na ọrụ mmezi a ga-agwụ ma usoro a ga-ebido ebido ruo Mee.
Echebere Epeepe Ropeway Line Echebere
Ụgbọ njem ọzọ na Ụlọ Ọgwụ Kocaeli City
Nbudata ohuru ohuru si Batukkent gaa Ụlọ Ọgwụ Obodo
Onye Nleta Transportgbọ njem Ọha na Anabata